Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » 18 jir ah inuu noqdo safiirka cusub ee Dekadda Canaveral
Aviation • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
LR - Guddoomiyaha Maamulka Dekedda Canaveral Robyn Hattaway iyo Jessica Maxwell, Danjiraha Port Canaveral. Hay'adda Canaveral Port Authority
Kulan bishii Ogosto ay yeesheen Guddiyada Maamulka Dekedda Canaveral, Guddoomiyaha Dekedda Robyn Hattaway ayaa ku dhawaaqay magacaabista arday ka qalin jabisay Dugsiga Sare ee Rockledge Jessica Maxwell inay noqoto Danjiraha Port Canaveral si uu u noqdo ergeyga Komishanka Hattaway ee bulshada dekadda. Jessica waa magacaabistii ugu horreysay ee Wakiilka Hattaway ee Danjiraha Dekedda, iyo markay jirtay 18, waa qofkii ugu yaraa ee u noqda ergo Guddiga Guddiga CPA.
Guddoomiye kasta oo ka tirsan Maamulka Dekedda Canaveral wuxuu magacaabi karaa ilaa laba qof si uu u noqdo wakiilka Wakiilka ee bulshada dekadda.
Danjirayaasha Dekedu waxay bulshada la hawlgalaan si kor loogu qaado fahamka weyn ee doorka Port Canaveral ee gobolka.
Waxay kaloo kordhiyaan wacyiga dadweynaha iyo fahamka qorshayaasha istiraatijiyadeed ee Maamulka Dekedda Canaveral.
“Haddaan nahay mas’uuliyiinta Dekadda, waxaan u baahannahay inaan eegno shaqaalahayaga mustaqbalka oo aan u diyaarinno jiilka soo socda inay hoggaamiyaan,” ayuu yiri Wakiilka Hattaway. “Jessica waxay ku faraxsan tahay inay barato oo la wadaagto aragtideeda jiilkeeda. Waxaan rajaynayaa inaad igala soo qayb -geli doontaan soo dhaweynteeda doorkeeda cusub ee Danjiraha Dekedda. ”
Iyada oo ah Danjiraha Dekedda, Jessica waxay ka caawin doontaa Wakiilka Hattaway barnaamijka Danjiraha Dekedda Yar ee Dekedda si ay ula wadaagto aqoonteeda barnaamijka HELM, iyada oo ujeeddadeedu tahay in la dhiso xiriirro iyo in la kordhiyo wacyiga dadweynaha iyo taageeridda hawlaha muhiimka ah ee Dekedda ee ka dhex jira dhallinyarada bulshada.
Arday ahaan Dugsiga Sare ee Rockledge, Jessica waxay ka qaybgashay dugsiga Caawinta Wax Barashada Hogaamiyayaasha Badda (HELM) barnaamijka. Waxay kaloo u soo noqotay Taliyaha Guutada Dugsiga Sare ee Rockledge ROTC. Fardoole firfircoon, qorshihii qalin-jabinta Jessica ee ahaa in lagu qoro Ciidanka Badda Mareykanka ayaa laga leexday ka dib markii shil faras-fuusho lagu ogaaday inay ka soo gaartay osteosarcoma, kansarka lafaha oo sababay luminta hal gacan ka hor intaan sannadku dhammaan.
Port Canaveral, oo ku yaal Florida, waa albaab laga galo maraakiibta iyo madadaalada iyo waliba xamuulka iyo saadka. Waxaa muddo dheer loo kala soocaa sida albaabka xuduudaha cusub ee safarka hawada. Dekedda Canaveral waxay martigalisaa ku dhawaad ​​5 milyan oo rakaab ah oo dalxiis u sii mara maraakiibta casriga ah iyo 6 milyan oo tan oo xamuul ah.
Dalxiiska iyo Madadaalada Port Canaveral
Dekedda Canaveral, booqdayaashu waxay la kulmi karaan xiisaha gantaalka loo ridayo inta qorraxdu ku dhacayso xeebta. The Cove waa aag madadaalo oo xeebta ku taal Port Canaveral oo leh maqaayado, qolal, dukaamo, doonyo kiro ah, iyo markab khamaar. Makhaayado badan oo Cove waxay leeyihiin miisas bannaanka ah iyo baararka tiki, meelo aad u fiican oo lagu daawado maraakiibta dalxiiska oo ku soo dul -socda ama ku raaxaysanaya neecaw xeebeed. Markay qorraxdu dhacdo, waxaa jira DJs, guutooyin nool, qoob ka ciyaarka, iyo karaoke, oh iyo kaamam.